N'ogbe SS316/SS304 igwe anaghị agba nchara grating emeputa na soplaya |Jintai
Aha ngwaahịa:SS316/SS304 igwe anaghị agba nchara grating
Igwe anaghị agba nchara abụrụla ngwaahịa a na-eji ụkwụ ụkwụ eme ihe maka gburugburu ebe na-emebi emebi ma bụrụkwa nhọrọ grating na-ewu ewu kemgbe ọtụtụ afọ.Ụlọ ọrụ anyị na-arụpụta igwe anaghị agba nchara swaged mmanya si ụdị 304 na 316 igwe anaghị agba nchara.Usoro swaging na-enye ohere mgbakọ nke ogwe grating mmanya site n'iji igwe kpochie ogwe osisi n'akụkụ aka nri na ogwe ndị a na-ebu ihe na oke nke 4 "na etiti. Usoro a na-enye ahịrị dị ọcha nke crisp nke ebe a na-adọba ụgbọala na-ewepụ ma wepụ ihe na-agbanwe agbanwe dị na ya. welded bar grating. Site n'iji teknụzụ ọgbara ọhụrụ dị, swaged mmanya grating na-enye ohere ohere dị iche iche gụnyere oghere dị nso nke 7/16" cc n'etiti ogwe osisi.Enwere ike ịmecha ihe ndị ahụ ma ọ bụ na-egbu maramara nke abụọ na-enye ogologo oge dị mma megide ọtụtụ ihe ike ike, ya mere a na-ejikarị ya eme ihe na osisi kemịkalụ, ụlọ ọrụ nhazi nri, ndị na-emepụta mmanụ na gas ma na-ejikwa ya n'ọtụtụ azụmahịa na ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
* Igwe anaghị agba nchara 304
* Igwe anaghị agba nchara 304L
* Igwe anaghị agba nchara 316
* Igwe anaghị agba nchara 316L
Ọ gwụla ma akọwapụtara ya, grating igwe anaghị agba nchara ga-emecha ihe igwe nri.Okpomọkụ sitere na usoro electroforge na-emepụta ihe na-eme ka ọkpụkpụ dị n'elu ebe a na-agbado.Electro-polishing bụ ụzọ isi wepụ ihe ngbanwe ahụ ma dị mgbe a rịọrọ ya.
★ igwe anaghị agba nchara grating bụ ihe kasị chemically eguzogide grating ngwaahịa.Ọ bụkwa ihe ngbanwe na-adịgide adịgide maka grating serrated na-amị amị na mmanya larịị.
★ igwe anaghị agba nchara grating dị na ọtụtụ dị iche iche ekwekọghị na spacing nhọrọ izute a dịgasị iche iche nke mkpa na ngwa.
★ The kasị dị irè ihicha usoro bụ na a stem Cleaner ma ọ bụ ike washer.Enwere ike iwepụ ihe mkpofu site na iji ahịhịa siri ike bristle.Enwere ike iwepụ ntụpọ ndị sitere n'okike, dị ka griiz ma ọ bụ mmanụ, site na iji ihe mgbaze nkịtị.Enwere ike ịchọ ịhịa ahụ ụfọdụ.
★ igwe anaghị agba nchara grating nwere ike zụrụ na ngwaahịa ogwe ma ọ bụ mepụta ya izute oru ngo nkọwa.
★ igwe anaghị agba nchara ngwaahịa na-ugbu a na-eji nri nhazi osisi, cheese osisi, ulo ozuzu okuko processors na ihe ọṅụṅụ osisi, n'etiti ndị ọzọ.Ngwaahịa na-eguzogide slip bụ 100% n'efu.Ha agaghị emerụ igwe na-edozi nri ma ọ bụ na ha agaghị emetọ ngwaahịa ikpeazụ.
A na-eji ụdị grating igwe anaghị agba nchara anyị mee ihe n'ime mmiri ọgwụgwọ / ụlọ mposi.
★ Harbor ọdụ ụgbọ mmiri & ngwá ụlọ.
★ Usoro nyocha mmiri mmiri na SS 316 Ti.
★ Njide okporo / jide grid maka ụlọ elu scrubber.
★ Nkwado grids maka idowe catalyst maka kehoraizin reactor arịa.
★ igwe anaghị agba nchara gratings maka Desalination osisi.
Ogwe grating, Steel Bar grating, Ogwe ala nchara nchara, Ogwe ụzọ nchara nchara, Galvanized Bar grating, Aluminom Bar grating,